Federalka Itobiya miyaa Oromiya ah mise Oromada ayaa Federalka Itobiya ah?. | ogaden24
Federalka Itobiya miyaa Oromiya ah mise Oromada ayaa Federalka Itobiya ah?.
Jan 17, 2019 - Aragtiyood
Shir kii Gudida fulinta EPRDF ayaa maalinimadii shalay ahayd ka Furmay caasimada Ethiopia ee Addis Ababa waxaana shirka furay oo Khudbad Jaha-wareer badani kamuuqdo oo kabaxsan Ajandihii shirka loogu Talagalay Jeediyay Abiy Ahmed.
Ujeedka Shirka ayaa ahaa in si dhab ah loogu gorfeeyo xlda dhabta ah ee Wadanku ku jiro oo ah mid aad u fool xun dhan kasta iyo in la isku qiimeeyo, qodobadii iyo jihooyinka la isla meel dhigay shir weynihii 11-aad ee EPRDF ee ka qabsoomay Magalada HAWASA, hase yeeshe Abiy oo u muuqday inuu ka baxay ama baal maray qodobadii shir weynaha laysla qaatay ayaa ku bilaabay hadal hadoof ah oo ka baxsan wixii meesha loo fadhiyey.
Sidii caadada u ahayd Dr Abiy ayaa hadalkiisii ku bilaabay , “isbadal ka Ethiopia waa mid lagu diirsaday Wana isbadal uu soo dhaweeyey caalamku, caqabado yar yar oo jira ka sokow isbadal ku meel aad u fcn buu marayaa, waxaana jira xoogag ama dadyoow kasoo jorjeeda isbadalka, rabana inay fashiliyaan laakiin dad badan oo dadkaas ka mid ah Gacantan ku haynaa qaybo kale na wan ku raad joogna.
Isku dhacyadii deeganada qaar kood waxaan qabanay dad ka mid ah dadkii colaada waday (la hayso wax oromo ah lama qabanin) sidoo kle qaybo kale na sharcigan hor keeni doonaa, (la hayso Oromada sharci ma qabto waxa sharciga la hor keeni doono ama ba la hor geeyey waa None Oromos ).
Deeganka Dulman ee Soomalidu ka mid ma aha kooxda dulmiga ku dhisan ee kalama adkaan ka ah ee EPRDF, laakiin hada ka hor markii shir EPRDF dhacaayo madaxda Soomalidu waxay ka ahaan jireen goob joog aan saamayn iyo cod ba lahayn ee iska dhex fadhi uun ah (One of the Chairs), Haatan se intiina waaba lagaga noqday (loo quudhi waayey), Madaxda Soomalidu malaha waxay ba ka raysteen kursigii ay ku caajisi jireen.
Sababta loogu diiday inay sidoodii Kursiga ku culaysiyaan waa maxay?
Kusimaha Madaxweynaha Deegaanka Mudane Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) iyo ku xigeenkiisa Aadan Faarax, waxaa si dadban shirka oogu diiday Madaxweynaha Oromiya Lamma Megersa oo wali ka cadhaysan Sababta uu Mustafe Oromo oogu sixiixi la’yahay Mooyale, Dire Dhaba, Tuli-guled iyo meelo kale oo badan.
Hadaba Raysul wasaaraha Jiifa ee Ethiopia Lamma ayaa Axmed Shide ka door biday Madaxweynihii iyo ku xigeen kiisii DDS. (Axmed Shide oo lagu wareeray Madaxweynaha DDS iyo Wasiir ka tirsan Xukuumada Abiy midka uu yahay). …..
Mustafe Cagjar xagee jiraa?
Kusimaha Madaxweynaha DDS Mustafe Cagjar iyo ku xigeenkiisii waxay joogaan magaalada Soomaliyed ee Dire Dhaba, Maxay ka dooneen? Maxay se ka hayaan? Waxba way ku indho qar sanayaan (Fool Haloow).
Cafartu oo Taageero Hub, Saad, Ciidamo, iyo daba ka riix ba ka helaysa Dowlada Federal ka Ethiopia waxay dagaal xoogan kula jirtaa shacabka soomaliyed ee Dulman ee ku nool Magaaloyinka Soomaliyed ee Maafiyadii TPLF Xooga sharci darada ah ku siisay Cafarta.
Dowlada Federalka ayaa horey u dirtay Gudi madax banaan oo xal ka keena Dhulka soomaliyed ee Cafartu ku soo duushay, gudidii wxy soo xaqiijiyeen magaloyinka Cadayta, Candhufo iyo Gadhmadow inay yihiin dhul soomaliyed saas darteena ay waajib tahay inay Cafartu kala baxdo ciidamada ay soo dhoobtay.
Sax cafartii oo baaq adag ka helaaya Dr Abiy ayaa bilaabay mudaharaad iyo rabshad markiiba Dr Abiy iyo Xertiisa Oromo oo uu u horeeyo Jawhar Maxamed, ayaa afka furtay wxyna ku baaqeen Shacabka Cafarta in la maqlo baaqooda, Abiy oo baaqaas ka jawaabaya na wuxuu si deg deg ah u diray ciidamo Taageere siiya Cafarta iyaguna kamaysan hagranin kamana aysan daahine shalay ayey Hub iyo hantiba gacanta u galiyeen Cafartii.
Cafartii na si deg deg ah bay weerar oogu qaadeen Shacabkii Soomaliyed ee horay ba loo laayey lkn Hiilka Allah baa ka weyn hiilka Abiy si fudud baana loo jabiyey Gaashaan Buurtii Abiy Atooraha ka ahaa Guushiina Allaah baa shacabkii Soomaliyed Gacanta u gashay.
Dhalinyarta Soomaliyed oo ka jawaabaya Gurmad ka Abiy iyo Gaashaan Buurta Cafartu Hogaaminayso ayaa shalay xidhay dhamaan ba wadooyinka isku xidha Jabuuti iyo Ethiopia, kuwaas oo Ethiopia u taqaano Dakada Qalalan sidoo kale dhalin yarta ayaa joojiyey Gaadiidkii Ganacsiga ee u kala Gooshayey Jabuuti iyo Ethiopia, 20- Gaadhi oo Jaad u sii waday Jabuuti jaadkii ay wadeen waxaa Xoolaha lagu siiyey magaalada Ayshica ee Gobolka Siti DDS.
By Dr Mohammed Farhan